Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeTanzania zoKhenketho nezoKhenketho » Oososayensi banexhala malunga nosulelo lwe-COVID-19 olunokwenzeka kwiitshimpanzi
Usulelo olunokwenzeka lwe-COVID-19 kwiitshimpanzi
Izazinzulu zolondolozo lwezilwanyana zasendle eAfrika zixhalabile malunga nosulelo olunokwenzeka kunye nokusasazeka kwe-COVID-19 kwiitshimpanzi kunye nezinye izilwanyana zasendle ezinxulumene nabantu.
Iingcali zolondolozo zithe ngophando ukuba iintsholongwane ezichaphazela abantu ngokulula zingatsiba zichaphazele iitshimpanzi kunye nezinye izilwanyana.
Indawo yaseMpuma kunye nakuMbindi weAfrika ngabona baphandi bachonge ukuzala inani elikhulu leetshimpanzi, iigorila kunye nezinye iintlobo zentsholongwane ezichaphazeleka kwintsholongwane echaphazela abantu.
Bathe abantu bechimpanzee basemngciphekweni wokufumana iintlobo zezifo ezosulelayo ezixhaphakileyo ebantwini.
UMlawuli woPhuhliso loPhando kunye noLungelelwaniso kwiZiko loPhando ngeZilwanyana zasendle laseTanzania (TAWIRI) UGqirha Julius Keyyu ucatshulwe yiTanzania yansuku zonke esithi izifo ezosulelayo ezifana necoronavirus zingasulela kwizilwanyana.
Umphandi omkhulu wezilwanyana zasendle wathi iingcali ziphuhlisa umthetho olandelwayo wophando lwangaphakathi oluya kubeka esweni impilo yeetshimpanzi zokulawula izifo ezosulelayo ezinjenge-coronavirus njengoko zinokosulela iinkawu xa zisondelelene nabantu abosulelekileyo.
Utshilo u-The Isicwangciso sokusebenza soLondolozo lweChimpanzee ka-2018 ukuya ku-2023 yaqaliswa ukujongana nosongelo olujamelene nabantu beetshimpanzi eTanzania.
Iingcali zezilwanyana zasendle ziye zatsho ukuba iichimpanzi zifunyenwe zisokola kwizifo zabantu ezinje nge-pneumonia kunye nezinye izifo zokuphefumla, zibeka emngciphekweni omkhulu kwimpilo yazo emva kokudibana nabantu.
Iingcali ziphakamise inkxalabo yazo kwimingcipheko yezempilo yeetshimpanzi kunye nezinye izilwanyana ezinxulumene nabantu ngexesha lokuqhambuka kwe-coronavirus, besoyika izinto ezimbi ifuthe kukhenketho nolondolozo eAfrika.
I-IMEX isungula iintsuku ezimbini zonxibelelwano kwiqonga leBuzzHub
I-Brits yenza i-mad mad ekhaya isiya ePortugal ukuya kubetha imithetho emitsha yokuvalwa
Iindaba zokuhamba ngeshishini
Ukuhamba ngeshishini kuya kufuna ukudityaniswa phakathi kokuwa kweepesenti ezingama-63%